RW Ku-xigeenka oo soo xiray shir ku saabsan u adkaysiga abaaraha. – Radio Daljir
RW Ku-xigeenka oo soo xiray shir ku saabsan u adkaysiga abaaraha.
Diseembar 5, 2016 2:35 b 0
Muqdisho, 05, Dec, 2016….Ra’iisul Wasaare ku xigeenka XFS mudane Maxamed Cumar Cate ayaa maanta soo gunaanaday shir looga tashanayey u adkaysiga afooyinka oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah Hay’adaha dowladda, wakiilo ka socday maamulada goboladda, Hay’adaha Samafalka, iyo khabiiro dhanka beeraha iyo xoolaha ah.
Ugu horayntii Lataliyaha Ra’iisul Wasaaraha ee dhanka u adkaysiga Afooyinka Cabdi Axmed Baafo oo soo qaban qaabiyey shirka ayaa sheegay in shirkaan qaybtiisii hore ay Soomaalidu si adag ugu hadashay sidii loo samayn lahaa isku xir guud inta aysan dhicin afooyyinku.
“Halku dhiga Sanadkaan aan dooranaya ayaa ahaa “Awood isugu gaynta barnaamijyo wax ka taraya abaaraha soo noq noqda” waana arin lagu farxo in maanta Soomaaliya ka tashanayso sidii loo samayn lahaa isku xir guud oo laga yeelanayo u adkaysiga afooyinka iyo masiiboyinka dabiiciga ah, shirka qaybtiisi hore waxaa ku kulmay wakiilada ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe, waxaana isla garanay in lagama maarmaan tahay in wax weyn laga badalo qaabka hada loo shaqeeyo oo ah in lagu baraarugo masiibooyinka iyagoo dhacay, lalana yimaado isku xir guud iyo diyaar garow dhanka u adkaysiga afooyinka” ayuu yiri Baafo.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaare ku xigeenka XFS oo ka soo qayb galay xirtaanka shirka ayaa sheegay in sanadkaan dalka ay ka jiraan abaaro aad u daran, oo saamayn lixaad leh ku yeeshay dadka iyo duunyadaba.
“Dalka waxaa ka jira abaaro aad u daran oo mudo dheer soo noq noqonayey, waxaa hada la qiyaasayaa in 50 % wax ka yar ay roobabku dalka ka da’ayaan, xoolihii baadkii ayaa ka sii dhamanaya, dadkana cuntada gaaabsi ku ah, markii sidaan wax u dhacaan ayaan baraarugnaa, waxaa hada dolwadu wadaa qorshe qaran oo qayb ka ah ka hortaga afooyinka, abaartu markay dhacdo waxaa la samayn karaa gurmad, waxayna qaadanaysaa mudo sidii looga soo kabsan lahaa, waxaan loo baahan isku xirka dowlada faderaalka iyo dowlad goboleedyada, maanta waxaa muuqata in uu jiro isu soo dhawaansho dhanka wada shaqaynta ah” ayuu yiri RW ku xigeenku.
Ugu danbayntii shirkaan oo socday mudo sadex maalin ah ayaa gaba-gabdii laysku raacay:
In shirarka isku xirka maamulada iyo dowlada dhexe marba gobol lagu qabto, kan ugu horeeyana uu ka dhacco bisha Maarso magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabelle,
In sadexdii boloodba mar laysugu yimaado shir noocaan ah.
In u adkaysiga afooyinka lagala xiriiro Wasaaraddaha Qorshaynta ee heer maamul goboleed iyo mid Federaal.
In Soomaalidu isku tashato oo miisaaniyadda ku baxaysa shirarkanoo kale ay bixiyaan maamulada gobolada iyo dowladda dhexe, si ay u noqoto wax Soomaalidu leedahay ah.
In Wasaaradaha Qorshayntu ee heer maamul goboleed iyo mid federal ay keenaan mashaariic qaran ee la xiriira u adkaysiga afooyinka.
In la dhiso awooda hay’adaha heer faderaal iyo heer maamul gooleed ee u adkaysiga Afooyinka.
COD-Garoonka diyaaradaha Boosaaso oo laga mamnoocay hub iyo ciidan.